यौन चरम आनन्द र दाम्पत्य सम्बन्ध राम्रो कसरी बनाउने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यौन चरम आनन्द र दाम्पत्य सम्बन्ध राम्रो कसरी बनाउने ?
यौन जीवन रोमाञ्चक बनाउनका लागि श्रीमान र श्रीमती दुबैको समान सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ । यसमा एक जनाको मात्र इच्छा पनि लाद्नु हुँदैन । दुबै मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार भएपछि गरिने यौन क्रिया सही हो ।
यौन सम्बन्ध मानव जीवनको एक अभिन्न र महत्वपूर्ण पाटो हो । यसको अनुभव र ज्ञानद्वारा जीवनलाई सुन्दर र आनन्दित बनाउन सकिन्छ । यौनको माध्यमले जीवनमा कसरी आनन्द लिन सकिन्छ र जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ख्याल हुनु पर्दछ ।
मानसिक तनावको अवस्थामा वा कुनै मानसिक समस्या छ भने त्यस्तो बेला यौन सम्पर्कबाट आनन्द लिन सकिदैन । दम्पतिबीचको मनमुटाव, डिप्रेसन, तनाव जस्ता कुनैपनि समस्यामा यौनको रुची नै जाग्दैन । जब यौनमा रुची छैन भने जबरजस्ती यौन क्रिया गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
यौन क्रियाकलापको माध्यमबाट खुशी, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुछ भने यौन पूर्व गरिने क्रियाकलापमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यौनसम्पर्क राख्नु अगाडि शारीरिक र मानसिक रुपमा आफू र आफ्नो पार्टनरलाई तयार गर्नुपर्छ । चुम्बन, मसाज गर्नु, पार्टनरलाई कसेर अंगालोमा बाँध्नु जस्ता सबै कुराले तपाईलाई यौनका लागि तयार गर्न र चरम सुख प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पु¥याउँछ ।
सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाईको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन् । तर के कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै यौन शक्तिवर्द्धक छ ? जुन खानाले मनमा खुसीयाली उत्पन्न गराउने इन्डर्फिन तत्व शरीरमा उत्पादन गराउँछ तिनमा वास्तवमा स्वस्थ यौन इच्छासँग सम्बन्धित तत्व पनि हुन्छन् ।
जति धेरै सेक्स त्यति नै सम्बन्ध सुमधुर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सेक्स सम्बन्धहरूमा प्रेम पक्कै हुन्छ जसले […]